‘क्रिकेट विकासकै लागि एनपिएलको सम्झौता’– अध्यक्ष चन्द | खबर कुञ्ज
‘क्रिकेट विकासकै लागि एनपिएलको सम्झौता’– अध्यक्ष चन्द
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) आगमी १० वर्ष सम्म आयोजनाको जिम्मा भारतीय कम्पनी सेभेन थ्री स्पोर्टस् प्रा.ली लाई दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रस्ताव अनुसार १० वर्षमा ४२ लाख रुपैयाँ पाउने सर्तमा क्यानले भारतीय कम्पनीलाई बेच्ने तयारी थाल्दा यसको आलोचना चौतर्फी रुपमा भइरहेको छ । क्यानका अध्यक्ष चतुबहादुर चन्दले नेपाली क्रिकेट हित र विकासका लागि भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको बताउँछन् । चन्दले उक्त रकम स्वदेशी कम्पनीबाट नपाएको बताउँछन् ।
‘एनपिएल नेपाल क्रिकेट संघले आयोजना गर्ने हो । भारतीय कम्पनीलाई व्यवस्थापन देखि लिएर सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनेछौं । फाइनल केहि पनि भएको छैन । प्रस्ताव अनुसार उनीहरुले स्टेडियममा लगानी गर्नेछन् । एनपिएलमा ६ टोलीबाट सुरु हुने छ । १० वर्षमा ४२ करोड रुपैयाँ क्यानलाई शुद्ध रुपमा दिने छ । काम गर्ने स्टाफको भने हामीले पैसा तिने छौं । आयोजनाको सबै खर्च उसैले नै गर्नेछ’, चन्दले भने ।
‘प्रिमियर लिगको पछाडि हामीले ३ सय ६५ दिन भाग्नु भन्दा १५ दिन समय निकाल्ने हो र त्यसबाट नेट बेनिफिट लिएर क्यानको अन्य विकासमा लगानी गर्ने छौं । क्यानले गर्दा अहिले पनि नाफा घाटा कति हुन्छ त्यसको सक्षम छैन । क्यानको हितमा मात्रै सहमित गरेर अघि बढ्ने हो’ , चन्दले भने । ‘स्वदेशी कम्पनीले पैसा पनि त दिनुपर्यो नि । संघलाई पैसा चाहिएन ? नेपाल क्रिकेटलाई व्यावसायिक बनाउनु पर्यो भनेर सबै कराइरहेका छन् । व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउन आर्थिक रुपमा अघि बढ्न खोज्दा त विभिन्न कुरा आइहाल्छ ।’
‘आउने पैसा अध्यक्षले आफ्नो गोजामा हाल्नी हो र ? हामी क्रिकेट विकासमै जाने हो । अन्य लिगका साथीहरुलाई समस्याको डर लागेको होला । अन्य लिगसँग हाम्रो सरोकारको विषय होईन । ती लिगलाई नियमन गर्न एउटा कार्यविधि बन्दै छ । कुनैपनि बोर्डको आफ्नै लिग हुन्छ । १५ दिनका लागि मात्रै अरुलाई गर्न दिएको हो । यसबाट शुद्ध फाइदा लिएर नेपाली क्रिकेटको विकासमा लगानी गर्ने हो ।
१० वर्षनै किन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘क्रिकेट राम्रो गर्यो भने धेरै माथि पनि पुग्ला । क्रिकेट भताभुंग भयो भने तलपनि झर्न सक्यो । क्रिकेटको हित नहुने सम्झौता हामी गर्दै गर्दैनौ । सम्झौता भएको छैन । नेपाली क्रिकेटको हित मान्दैन भने नेपाली कम्पनीसँग कुरा गरौंला नि । नेपाली कम्पनीसँग सक्षम छ भने कुरा गरौंला । नेपाली कम्पनीसँग अनौपचारिक छलफल भएको हो । वार्षिक ७५ लाख रुपैयाँ दिन भन्दा अघि कोहि अघि बढ्दैन। ’
‘डिपिएल, इपिएल, पिपिएलमा लगानी गरेका कम्पनीलेनै एनपिएलमा लगानी गर्ने ता होलान् नी । नाम त तोक्दैन । तर ती कम्पनीसँग कुरा गर्दा ७० लाख भन्दा वर्षको दिन अघि कोही बढ्दैन । ७० लाख ठिक छ कि वर्षमा ४ करोड आउने सहि छ’, चन्द प्रश्न गर्छन् । ‘कम्पनी जो सुकै होस् । क्यानको स्वामित्वमा लिग हुन्छ । नेपाली खेलाडी र नेपाल क्रिकेटको हितमा हुने गरि सम्झौता गर्छौं । अहिले चलिरहेको जस्तो एनपिएल होईन । विश्वस्तरिय क्यारेबियन प्रिमियर लिग स्तरको गर्न खोजिएको हो । पैसा नभए पनि त्यस्तो गर्न खोजिएको हो । अहिलेको जस्तो भए त किन गर्न पर्यो । खेलाडीलाई पनि लाभ होस् । पुर्वधारको पनि विकास होस् भन्ने उदश्यले गर्न थालिएको हो ।’
अध्यक्ष चन्दले भविष्यलाई ध्यानमा राखेर नै निर्णय लिइएको बताए । ‘हो खुल्ला आव्हान गरेको भए झन ठूलो लगानी आउन सक्छ । तर कोरोना महामारीमा बजारको मूल्य र नेपाली क्रिकेटको स्तर सबैलाई थाहा छ । हामीसँग एउटा स्टेडियम छैन ।’ ‘क्रिकेटलाई बेच्नुपर्छ भन्ने खोजेको हो । इपिएल, डिपिएल र पिपिएल स्तरकै गर्ने हो भने त मेरो भन्नु केहि छैन । विश्व बजारमा नेपाली क्रिकेटलाई लैजानु पर्छ । साधारण सभामा पनि यस विषयमा छलफल भएको छ । नेपाल क्रिकेटको हितमा हुने गरि छलफल गरेर अगाडि बढाउने निर्णय दिएको छ ।’
सुदूरपश्चिमबाट उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा कुँवर विजयी
धनगढीमा २२० जना कोरोना संक्रमित, कुन वडामा कति ?
सुदूरपश्चिममा १०० जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या ५९०३ पुग्यो
सुदूरपश्चिमका ४९२९ संक्रमितले कोरोना जिते
मोर्गन र मालानको अर्धशतकमा इंग्ल्याण्डको जित
धनगढीमा समुदायमा फैलियो कोरोना, उपमहानगरपालिका के गर्दैछ ?
च्याम्पियन्स लिग : बायर्न म्युनिख र म्यानचेष्टर सिटी अन्तिम १६ मा
दौड गोपी दौड !’
‘धनगढीदेखि सागमा स्वर्ण पदक हुदैं ओलम्पिकसम्मको यात्रा’